မြန်မာ လို ဆီးချိုရောဂါ ဟု ခေါ်သည်မှာ ရောဂါ နှင့် ဟတ်စပ်မှု မရှိပါ။
Posted on Friday,3December 2010 6:20 AM
တစ်ခါတစ်ရံ စကားလုံး တွေကို ခေါ်ဆိုရသည်မှာ ၄င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက် နှင့် တိုက်ဆိုင်မှု မရှိသည့်အတွက် လစ်ဟာပြီး အားနည်းချက် ရှိနေပါသည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် မြန်မာ လို ခေါ်နေကြစကားလုံး ဆီးချိုရောဂါ မှာ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ၊ ရောဂါ၏အခြေအနေ နှင့် ရောင်ပြန်ဟတ်မှု မရှိပါ။
အင်္ဂလိပ်လို Diabetes ဆိုသည်မှာ သွေးကြောအတွင်း သကြားဓါတ်တွေဟာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တာထက် မြင့်တက်နေသည့် အခြေအနေ ကိုဆိုလိုပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် သာမန်နုန်းထက် သကြားဓါတ် သွေးကြောအတွင်း များ ပြားနေသော အခြေအနေ ကိုဆိုလိုသည်။ သွေးကြောအတွင်း သကြားဓါတ်များပြားနေသည့်အခါတွင် သကြားဓါတ် အချို့  ကို ကျောက်ကပ်သည် ဆီးမှတဆင့် သွေးကြောအတွင်းသကြားဓါတ် သိုထားနိုင်မှု စံနုန်း ကိုအခြေခံပြီး အပြင်သို့ထုတ်ပစ် လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆီးတွင် သကြားဓါတ် ပါရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါ မရှိသော်လည်း သွေးကြောအတွင်း သကြား ဓါတ် သိုထားနိုင်မှုစံနုန်း နိမ့်သော သူများတွင် ဆီး၌ သကြားဓါတ် ပါရှိနိုင်ပါသည်။
မြန်မာလို ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်နေသော ဆီးချိုရောဂါသည် သွေးကြောတွင်းသကြားဓါတ် ကို ရည်ညွန်းခြင်း လုံဝမရှိဘဲ၊ ဆီးတွင် သကြားဓါတ် ကိုသာလျှင် တိုက်ရိုက်ရည်ညွန်း လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် များပြားသောလူများသည် ဆီးချိုရော ဂါ၏အဖြစ်မှန် အကြောင်းကို သိရှိခြင်းမရှိဘဲ၊ ဆီးချိုပြီး သွေးတွင်းသကြားဓါတ် နှင့်သက်ဆိုင်မှု မရှိ သကဲ့သို့ နားလည်မှု လွဲမှားကြပါသည်။
အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှ အချို့လူများ မကြာခန ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ “ ကျွန်ုပ်မှာ ဆီးချိုရှိတယ်၊ သို့သော်လည်း သွေးချိုမရှိ ဘူး“၊ “ကျွန်ုပ်မှာ သွေးချိုရှိတယ်၊ သို့သော်လည်း ဆီးချိုမရှိဘူး“၊ တို့ နှင့် မကြာခန ”ကျွန်ုပ်မှာ ဆီးချိုရောသွေးချိုရော ရှိတယ်“ ဟု ပြောကြ
ြ ပီး ဆီးချိုသောအကြောင်းကိုသာလျှင်ရည်ညွန်းသည့် မြန်မာလိုအမည်ပေးထားခြင်း ကြောင့် ၄င်းတို့သည် ရောဂါ၏အဓိပ္ပါယ် ကိုမသိရှိဘဲ၊ ဆီးချို နှင့် သွေးချို သည် သီးခြား သတ်သတ်စီ ဟုမှတ်ယူကြသည်။
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်သည် ကြေးမုံသတင်းစာ တွင်မြန်မာလိုရေးထားသော ဆီးချို အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ကိုဖတ်ရှုခဲ့ရသည်၊ ၄င်းတွင် စာရေးသူသည် အမျှော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့် ရှုတ်ထွေးမှုကိုရှောင်ရှားလိုသည့်အတွက် မြန်မာလို အမည်အသစ် တည်ထွင် ပေးခဲ့ပါသည်။ စာရေးသူ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မြန်မာလိုဆီးချိုရောဂါ အသစ်အမည်ပေးထားတာကတော့ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်ပါ သည်။
22 Comments to မြန်မာ လို ဆီးချိုရောဂါ ဟု ခေါ်သည်မှာ ရောဂါ နှင့် ဟတ်စပ်မှု မရှိပါ။:
bilal on Friday, 27 July 2018 4:41 PM
essay writer service uk on Saturday, 28 July 2018 7:50 PM
Wow! This is really great news for that you sharedavery amazing thing about the music. You launched your music's new CD. I hope people like this and enjoy very much when they listen to your CDs.
laustan on Saturday, 8 September 2018 8:34 PM
Makingamove to deal with various hazard factors enhances your standpoint. Fortunately numerous way of life changes help control various hazard factors. For instance, physical movement can bring down your circulatory strain, help control your glucose level and your weight, and lessen pressure.
Maria H. Lindemann on Saturday, 15 December 2018 8:04 PM
Blade Runner2Jack on Monday, 11 February 2019 6:56 PM
windows 10 backup on Saturday,6April 2019 10:01 PM
hey, I have information about Windows 10 visit here and read this article help you create the backup on windows 10 how to do read and Also Other articles give you correct information.
carpet can protect on Wednesday, 8 May 2019 9:44 PM
A stair carpet can protect steps from day to day foot traffic and prevent slips and falls. People, pets, and dragging heavy items can all take their https://staircarpets.home.blog
Saratov on Tuesday, 21 May 2019 7:26 PM
This spring I’m taking the leap and purged my old makeup, I’ve gone through the tortuous task of growing my eyebrows out and am planing on taking my hair much much lighter than its ever been, still while complimenting my skin tone.
buy dissertation online on Monday,3June 2019 6:10 AM
I am not able to understand this language. I don't know what is the purpose of this post.
UK Essay Help on Sunday,9June 2019 8:41 PM
Great publication and nice post.
Geek squad support on Saturday, 22 June 2019 9:40 PM
pi law attorney on Monday, 24 June 2019 6:05 PM
Geek squad support on Tuesday, 25 June 2019 4:36 PM
Certus Trading Reviews on Saturday, 29 June 2019 5:47 PM
air conditioning company on Thursday, 25 July 2019 10:18 PM
I am so happy I situated your blog site, I asamatter of fact located you inadvertently, while I was seeing on google for an included factor, Anyways I am noted below presently as well as additionally similarly would definitely similar to state give thanks.
Geek squad on Monday, 19 August 2019 10:28 PM
Geek squad on Monday, 19 August 2019 10:29 PM
automobile lemon law on Monday, 26 August 2019 11:33 PM
That isavaluable blog site web site. What I'm broadcasting is them. You haveadecent arrangement of grasping with this inconvenience, in this manner much intrigue. What's more, you recognize basically explicitly only exactly how you can, what's more, make numerous individuals really associated with elements, plainly from your destructive effects.
www.mywifiext.net on Wednesday,4September 2019 4:42 PM
thaks for sharing such an beautiful post really amazed after watching this
minion89 on Wednesday, 18 September 2019 8:36 PM
Very good blog. The content is of interest to many people including me. I will often visit your blog. fnaf